ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖွယ် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
တခါတလေ ဆိုင်မှာဝယ်စားဖို့ မလွယ်ကူ တဲ့နေရာကိုရောက်နေတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားလိုက်နိုင်ရင် ပိုလဲကောင်း သန့်လဲသန့်တဲ့အစားအစာ များကိုအလွယ်တကူလုပ်စားရနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်
မအားဘူးဖြစ်နေလို့ ဒီရက်ပိုင်းဘာမှကိုမတင်ဖြစ်ဘူး၊ နံကထိုင် လုပ်စားတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
-ဂျုံ ၁ခွက်ခွဲ( ဆန်ချိန်ခွက်)
-Castar Sugar သကြားအချောမှုန့် ၃ဇွန်း( ဟင်းချက်ဇွန်း)
နံကထိုင် ပြူလုပ်ရာတွင် Castar sugar သုံးမှ မုန့်ကောင်းပါသည်
ဂျုံ၊ ထောပတ်၊ သကြား၊ ကြက်ဥ ၊ ဆော်ဒါ များကိုဇလုံတခုထဲ ထဲ့ကာ သမအောင် နယ်ပေးပါ။
အခြားမုန့်များလို သိပ်မနယ်ရပါ။ သိပ်နယ်လွန်းရင် ဆီများထွက်လာပါမည်။
ပြီးမှ အဝိုင်းကလေးများ ပြူလုပ်ကာ မုန့်ဗန်းပေါ်တွင် ခြား၍တင် ထားပါ။ ခြားရခြင်းက မုန့်ပွလာလျင် တခုနဲ့တခုပူးကပ်မသွားစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်အပူပေးပြီးသား Oven ထဲတွင် ၁၀မိနစ်ခန့် အပေါ်မီး အောက်မီးနဲ့ ၁၅၀ ဒီဂရီနဲ့ဖုတ်ပါ။
မုန့်လေးများ ကို ရွှေ့ကြည့်လို့ ဗန်းမှာမကပ်နေရင် ကျက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အအေးခံပြီးရင် နံကထိုင်လေး အဆင်သင့်စားလို့ရပါပြီ။
ပူလွန်းတဲ့ဒီလိုရာသီမှာ ရေခဲမုန့်လိုအချိုစာကတော့ တကယ့်ကိုပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးပါ။ ရန်ကုန်မှာတုံးက အိသက် မမလေးက ရေခဲမုန့် ကြော်လိုက်ကျွေးတတ်သလို သူကိုယ်တိုင်လဲလုပ်တတ်ပါတယ်။ ခုဒီမှာပူလာလို့ ဒါလေးကိုလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
-bread crumb(သို့) ကိတ်ခြောက်မှုန့်၎ဇွန်းစာ (စားပွဲတင်)
– nutmeg ၁ဇွန်း(အချိုဇွန်း)
ဇလုံထဲတွင်bread crumb (သို့) ကိတ်ခြောက်မှုန့်နဲ့အုန်းသီးအမှုန့်ကိုရောထားပါ။
ရေခဲမုန့် ကိုရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ပြီး ပြီးချင်းအလုံးလေးဖြစ် ခပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ကြက်ဥနှစ်မှာ နှစ်ကာ နဲ့bread crumbလိုက်ကပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်Oven tray ပေါ်ထဲ့ပြီး freezer ထဲ နာရီဝက်လောက် ထဲ့ထားပါ။ နာရီဝက်အကြာပြန်ထုတ်ပြီး ကြက်ဥအနှစ်မှာ နှစ်ကာ နဲ့bread crumb ခပ်ထူထူကပ်လိုက်ပါ။Freezer ထဲ နောက်ထက် ၁နာရီလောက် ထပ် ထားပြီးရင်ကြော်လို့ရပါပြီ။
ဆီပူလာရင် ရေခဲမုန့်အလုံးလေးကို နှစ်ကြော်လိုက်ပါ။ ၅စက္ကန့်လောက်ကြော်ရင်ရပါပြီ။
စားတဲ့အခါ စတော်ဘယ်ရီ၊ ကီဝီ၊ စပျစ်သီး တို့ကို wiping cream ဖြင့်မွမ်းမံကာ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
အိသက် သားအကြီးက ပုဇွန်ချဉ်အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပုဇွန်ချဉ် လန်ဒန်အိမ်မှာလုပ်စားဖြစ်တယ်။ ဒါကို လန်ဒန် လာလည်သွားတဲ့ သူ့အဖွား ဒေါ်သဲသဲလှုပ်များက ပုဇွန်ချဉ် ပါပို့တဲ့ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။ ကိုထက်မေမေက ဝါးခယ်မကပါ။ ပုဇွန်ချဉ် နံမည်ကြီးသောဒေသပေါ့။ ကိုထက်မေမေက ဝါးခယ်မကပုဇွန်ချဉ်ဒိုင်ကိုရှယ်အောဒါမှာ ချဉ်ပြီးပြီးချင်း ရန်ကုန်ကိုပို့ခိုင်းပါတယ်။ ကျမတို့ ဓနုဖြူဆိုင်( လှည်းတန်း- အင်းစိန်) ဆိုင်မှာလဲအဲဒီပုဇွန်ချဉ်ပဲသုံးတာပါ( ဒါကကြောငြာ) တနင်္လာမနက်စောစော ကားဂိတ်ကသွားယူ ကျမမေမေက ကျန်သူပို့ချင်သော ပစ္စည်းများနဲ့ မနက်၁၂နာရီမကျော်ခင်EMS က ပို့ရင်ဒီကို ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ရောက်ပါတယ်။တခါပို့ရင်၈ပိဿာပို့ပါတယ်။ လမ်းမှာချဉ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့။ တခါတရံ မချဉ်သေးပဲရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရောက်ပြီး ၂ ရက်လောက်မှပြန်ဖြေကြည့်ရပါတယ်။သားစားပုံကို သိတဲ့ အိသက် မိတ်ဆွေများကဆိုတော်တော် အံဩပါတယ်။ ပုဇွန်ချဉ်အစိမ်းအတုံးလေးများ၊ သရက်သီးစိမ်း အတုံးလေးများကို ချဉ်ရည်ဟင်း(@) ဟင်းချိုနဲ့ နယ်ပေးလိုက်ရင်တော်တော်စားပါတယ်။ အိသက်ကိုယ်တိုင်ကလဲ အချဉ်ကြိုက်လို့ ကလေး၂ရောက်လုံး သရက်သီးစိမ်းကြိုက်ပါတယ်။အငယ်မလေးကတော့ ပုဇွန်ချဉ် မစားပါ။ (အသားမစားပါ)။ ခုအိမ်မှာ ပုဇွန်ချဉ် ပြတ်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာလဲကိုထက်မေမေ မအားလို့ ကျမသားရဲ့ ပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရပါတယ်။ ကျမ ငါးဖယ် ချဉ်ပါမယ်နော်။ လုပ်နည်းတူတူပါပဲနော်။
– ငါးဖယ် ၅၀၀ ဂရမ်
-ဆား ၁၅၀ ဂရမ်( ဆားများမှချဉ်ပါမယ်၊ချဉ်သွားရင် မငံပါဘူးနော်)
nam ပေါင်ဒါကိုဆားအစားသုံးရင်၂ရက်အတွင်းချဉ်ပါမယ်။ကျမက သားအစိမ်းအတိုင်းစားမှာမို့ ယမ်းမသုံးချဉ်လို့ပါ။
-ထမင်းကြမ်း လက်၂ဆုတ်စာ( ထမင်းရိုးရိုးလဲရပါတယ်)
ထမင်းကြမ်း လက်တဆုတ်ခွဲစာကိုပြဲနေအောင် ချေလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ငါးဖယ်ထဲကို ဆားထဲ့ ချေထားသောထမင်းကြမ်း ထဲ့ပြီးနယ်ပါ။ ရိုးရိုး ငါးဖယ်စီးအောင်ပေါက်သလို ပေါက်ပါ(သို့) စီးသည်အထိနယ်ပါ။
ငါးဖယ်စီးလာရင် အိတ်ထဲ ထဲ့ပြီးကျစ်နေအောင်စည်းပါ။ ပြီးရင် အောက်က ဗန်းခံ အပေါ်က ပန်းကန်မှောက်ပြီး ငါးဖယ်ချဉ်လောင်းထုပ်လေးကိုတင်ပြီး အလေးတခုနဲ့ဖိထားလိုက်ပါ။မီးဖိုထဲက အပူချိန်အများဆုံးနေရာလေးမှာထားပါ။ ၃ရက်လောက်ဆိုရင် အိတ်ထဲမှာ အရည်လေးများ ထွတ်နေပါမယ်။အဲဒီအခါမှအပေါက်လေးများဖောက်ပေးပါ။ အရည်လေးများ ဗန်းထဲသို့ကျနေတာတွေ့ရပါမယ်။
ပန်းကန်မပါလဲအဲလို သံဇကာ နဲ့အောက်ကဗန်းခံလို့ရပါတယ်
အရည်ကျပြီးနောက် ၂ရက်လောက်ဆိုချဉ်ပါပြီ။အရောင်လေးလဲပန်ရောင်ဖျောဖျောဖြစ်နေပါပြီ။အထုပ်လေးကို တို့ကြည့်ပါ။ ထုတ်ထုတ်လေးဖြစ်နေပြီဆိုရင် အသားမြည်းကြည့်ပါ။
အချဉ်အနေအထားစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ရင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ရာသီဥတု အပူအအေးပေါ်မူတည်ပြီး ၅ရက်ကနေ ၇ရက်ကြာတတ်ပါတယ်။
ချဉ်သွားရင် ဘူးတဘူးထဲထဲ့ပြီး ဆီမြုတ်အောင်ထဲ့ထားလိုက်ပါ။ အကြာကြီးခံပါတယ်
အခုအိမ်မှာ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် ရော ဂျုံပူတင်း ရော လုပ်ပြီး အဆင်သင့်ရှိနေတော့ ဖာလူဒါ လုပ်နည်းလေးတင်ပေးမယ်နော်။
– နွားနို့ကျိုပြီးအပျစ် @ cream milk လီတာဝက်
– ဂျုံပူတင်း ဂျုံပူတင်း( ဖာလူဒါမှာသုံးရန်)/ Flour Pudding (to use in Falooda or Faluda)
-ရေခဲမုန့် ( ready made)
သကြားကိုရေ လီတာဝက်ခန့်ထဲ့ပြီး အရောင်နဲငယ်ထဲ့ပြီးပျစ်လာအောင်ကျိုပါ။ rose syrups အရည်လေး ၂ဇွန်းခန့်ရောပါ။အနံ့မွှေးစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
သာကူကိုလဲ မျက်စိပျောက်တဲအထိအရောင်ထဲ့ ပြီးကျိုပါ။ ပြီးရင်ဇကာထဲ သွန်ပြီးရေအေးနဲ့ဆေးပေးပါ။ သာကူများကပ်မနေစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
နို့ကိုပျစ်ပျစ်ကျိုထားပါ။ ကျိုပြီးကိုသုံးလဲရပါတယ်။ ကြာကြာကျိုစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကျိုပြီးရင်အအေးခံထားပါ။
ရောင်စုံready made ဂျယ်လီ လေးများကိုအတုံးလေးများလှီးထားပါ။ အိသက်တို့ဆိုင်မှာတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပေါ့နော်။ လွယ်အောင်လို့ ။
အရင်ဆုံး သကြားရည်၂ဇွန်း( စားပွဲတင်) ၊ ရေခဲထဲ့ မုန့်လက်ဆောင်း ၂ဇွန်း၊ သာကူ ၁ဇွန်း၊ ပူတင်: ၁ဖတ်၊ ရေခဲမုန့်၁ဇွန်း၊ နို့ ၅၀ ဂရမ် ( အချိုပေါ့ချင်ရင်နို့ပိုထဲ့ပါ) ၊ ဂျယ်လီလေးများအပေါ်က တင်ပြီးရင် ဖာလူဒါလေးရပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေပြေလုပ်နိုင်ပါစေနော်။
By eithet • Posted in ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖွယ်, အိန္ဒိယဟင်းလျာ, မြန်မာမုန့်များ
ပဲကပ်ကြော်ကတော့ မုန့်ဟင်းခါးတို့ ၊ ရခိုင်မုန့်တီ တို့မှာ တွဲစားရင်အလွန်အဆင်ပြေ နှစ်သက်ဖွယ်ရာပါနော်၊ ရန်ကုန်မှာလို ဟဲ့ပြေးဝယ်လိုက်စမ်း လို့အလွယ်ခိုင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထစနစ်နဲ့ ကြော်စားရပါတယ်၊ ဒါကတော့ လန်ဒန်ပဲကပ်ကြော်လေးပါနော်
It goes extremely well with soup dishes like Mote-hin-gar and Rakhine-mote-ti. You are on you own if you want to eat it here as it is not readily available in nearby stalls as in Yangon. So, this is London Pae-kat-kyaw (Fried chick peas), I suppose.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ( လေးချပ်စာ)/-Contents (for4pieces)
-ကုလားပဲလက်တဆုပ်စာ ( ရေစိမ်ပြီး)/-one handful of chick peas ( soaked with water )
-ဂျင်းရည် ( စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)/- Ginger watered (1 table spoon)
-ပဲမှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)/-pea flour (1 table spoon)
-အကြော်မှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း)/-glutinous rice flour ( 8 table spoons )
-ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆိုဒါ ဇွန်းဖျားစာ/-salt, chicken powder,atouch of soda flour
ကုလားပဲလေးတွေကို ခဏ ပြုတ်လိုက်ပါတယ်၊ ( ၅မိနစ်လောက်)
ဂျင်းရည် ( စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)၊ ပဲမှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်း)၊ အကြော်မှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း)၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆိုဒါ ဇွန်းဖျားစာ တို့ကိုရေနဲ့ကျဲကျဲ ဖျော်ထားပြီးကုလားပဲလေးတွေကို ထဲ့မွှေထားပါ
Boil the chick peas for about5minutes. Ginger watered, chick pea flour, glutinous rice flour, salt, chicken powder and soda flour are to be mixed with water and mix them with boiled chick peas.
ဒယ်အိုးပြား အသေးတချပ်ထဲ ဆီထဲ့ မီးအနေတော်နဲ့ ဆီအရမ်းမပူခင် ဖျော်ထားတာကိုဒယ်ထဲတွင်အဝိုင်းသဏ္ဍန်ထဲ့ပါ၊ ဆီအရမ်းပူရင်ကွဲထွတ်တတ်လို့၊ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြော်ပါ
Pour cooking oil intoasmall shallow frying pan with medium heat and then pour the mixed likeacircular shape into it. Please be patience that if the heat is too strong it may break up the piece.
ကျွတ်လာရင် တဖတ်စီ လှန်ပြီး ပဲကပ်ကြော်လေးရွှေဝါရောင်သန်းပြီးကျွတ်ပြီဆိုရင် ဆီစစ်ပြီ လေလုံဘူးထဲ့သိမ်းထားရင် အကြာကြီးအထားခံပါတယ်
When it becomes crispy, turn over until both sides looks goldenish, then drain the oil and enjoy. If you keep it inaair tight container then it may lastalot longer.